အပါ့အိမ်: November 2010
ထူးဆန်းတဲ့ ခရစ်စမတ် ပြဇာတ်တပုဒ် Trouble at the Inn
ထူးဆန်းတဲ့ ခရစ်စမတ် ပြဇာတ်တပုဒ်
"Trouble at the Inn"
By Dina Donohue
အမေရိကန်ပြည် အနောက်အလယ်ပိုင်းဒေသရဲ့ မြို့ကလေးတမြို့မှာ ခရစ်စမတ် ပြဇာတ်တွေအကြောင်း အခု နောက်ပိုင်း ပြောကြပြီဆိုရင် "ဝေါလေ့စ် ပါလင်း" Wallace Purling ရဲ့ နာမည် အမြဲ ပါလာလေ့ ရှိပါတယ်။ တင်ဆက်နေကျ သူတို့ မြို့ကလေးရဲ့ ကျောင်းပြဇာတ်မှာ ဝေါလီ Wally ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ပုံကတော့ ပြောစမှတ်တွင်လောက်အောင် လွဲချော်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီည ပြဇာတ် သွားကြည့်တဲ့ သူတွေကတော့ ဖြစ်ပျက်ပုံ အတိအကျကို ပြန်ပြောကြရတာ မမောနိုင်မပန်းနိုင်အောင်ပါပဲ။
အဲဒီတုန်းက ဝေါလီက ၉ နှစ်။ အသက်နဲ့စာရင် အတန်းက တတန်းနောက်ကျနေတယ်။ ကျောင်းစာမှီဖို့ မလွယ်တဲ့သူလို့ မြို့ထဲကလူအများစုက သိထားတဲ့သူပါ။ လူကောင်က ကြီးကြီး၊ ထုံထုံထိုင်းထိုင်းနဲ့ အလွန်နှေးကွေးသူပါ။ အတန်းဖေါ် ကလေးတွေကတော့ ဝေါလီကို သဘောကျကြတယ်။ သူတို့အားလုံးဟာ ဝေါလီထက် အသက်ငယ်ကြတယ်။ သူများနဲ့ တွဲမကစားတတ်တဲ့ ဝေါလီက ဘောလုံး ဝင်ကန်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့ခမျာ စိတ်အတော် ထိန်းကြရရှာတယ်။
အများစုကတော့ ဝေါလီကို ကွင်းပြင်ထုတ်ထားတာပဲ ကောင်းတယ်လို့ သဘောထားကြပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဝေါလီက ပါချင်တယ်။ စိတ်မခုတတ်ပေမယ့် ခုန်ဆွခုန်ဆွ လုပ်နေတော့တယ်။ သူဟာ အမြဲ ကူညီတတ်သူပါ။ စေတနာကောင်းတယ်။ ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် နေတတ်တယ်။ ရှုံးတဲ့သူ၊ နစ်နာနေတဲ့သူဖက်မှာ နားလည်ရခက်လောက်အောင် ဝင်ကူတတ်သူပါ။ အကြီးကလေးတွေက အငယ်ကလေးတွေကို လိုက်ဖမ်းတဲ့အခါ "သူတို့လည်း နေပါစေကွာ။ နှောက်ယှက်တာမှ မဟုတ်ပဲ" လို့ ဝင်ပြောတတ်သူပါ။
ဒီနှစ် ခရစ်စမတ် ပြဇာတ်မှာတော့ ပလွေတချောင်းကိုင်ပြီးတော့ သိုးထိန်းလုပ်မယ်လို့ ဝေါလီ စိတ်ကူးယဉ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ပြဇာတ်ဒါရိုက်တာ "မစ္စ လမ်ဘတ်ဒ်" Miss Lumbard က ဝေါလီကို ပိုအရေးပါတဲ့ ဇာတ်ကောင်နေရာကို ပေးပါတယ်။ တည်းခိုခန်းပိုင်ရှင်နေရာဆိုရင် စကားပြော အများကြီး မကျက်ရဘူး။ ပြီးတော့ ဝေါလီရဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်ကလည်း ယောသပ်ကို ငြင်းတဲ့နေရာမှာ ပိုပြီး မာန်ပါမယ်လို့ စဉ်းစားမိလို့ပါ။
အဲဒီ မြို့ကလေးရဲ့ ခရစ်စမတ် ပြဇာတ်ကို ကူညီပံ့ပိုးပေးနေကျ မြို့ထဲက လူအတော် များများကလည်း ခရစ်စမတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ အသုံးအဆောင်တွေ ရှာပြီး ယူလာပေးကြတယ်။ သိုးထိန်းတောင်ဝှေးတွေ၊ နွားစာခွက်တွေ၊ မုတ်ဆိတ်မွေး အတုတွေ၊ ခေါင်းဆောင်းတွေ၊ ဦးထုပ်တွေ၊ သရဖူတွေ၊ ရောင်ခြည်ဖြာဖို့ မီးလုံးကလေးတွေ ရှာယူလာကြတယ်။ ပြဇာတ်စင်တခုလုံး တယောက်တပေါက် ဆူညံနေပြီ။ အဲဒီည စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့နေရာမှာတော့ စင်ပေါ်က လူတွေရော၊ စင်အောက်က လူတွေပါ "ဝေါလေ့စ် ပါလင်း" ကို မှီကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ အချက်မပြခင် စင်ပေါ်မှာ မမှားရအောင် မစ္စ လမ်ဘတ်ဒ်က အထပ်ထပ် လေ့ကျင့်ပေးထားတာဆိုတော့ သူ့ခမျာ ကုလားကာကြားမှာ ရပ်ပြီး ပြဇာတ်ကို အကြီးအကျယ် စိတ်ဝင်တစား ကြည့်နေခဲ့တာလို့ နောက်ပိုင်း သူတို့ ပြောပြချက်အရ သိရပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ယောသပ်ထွက်ရမယ့်အချိန် ရောက်လာပါတယ်။ မာရိကို တည်းခိုခန်း တံခါးဝအထိ ညင်ညင်သာသာ ကြင်ကြင်နာနာ တွဲခေါ်လာတယ်။ ယောသပ်က နောက်ခံ ပန်းချီးကားပေါ်မှာ ဆွဲထားတဲ့ သစ်သားတံခါးကြီးကို ခပ်ပြင်းပြင်း ခေါက်လိုက်တယ်။ တံခါးနားမှာ အသင့်စောင့်နေသူကတော့ တည်းခိုခန်းပိုင်ရှင်ကြီး ဝေါလီ ပေါ့။
ဝေါလီက တံခါးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်ပြီး၊ "ဘာလိုချင်သလဲ ဟေ့" လို့ ခပ်ပြတ်ပြတ် အမူအယာနဲ့ မေးလိုက်တယ်။
"တည်းခိုစရာ ရှာတာပါ ခင်ဗျာ"
"တခြားမှာ သွားရှာကြ" လို့ ဝေါလီက ခပ်တည်တည် ကြည့်ပြီး၊ ခပ်ငေါက်ငေါက် ပြောလိုက်ပါတယ်။ "ငါ့ တည်းခိုခန်းက ပြည့်နေပြီ" ။
"ကျွန်တော်တို့ နေရာအနှံ့ ရှာပြီးပါပြီ။ မရပါဘူး ခင်ဗျာ။ ခရီးဝေးက လာကြရလို့ အတော် ပင်ပန်းနေလို့ပါ ဆရာကြီးရယ်"
"ဒီ တည်းခိုခန်းမှာ မင်းတို့နေစရာ မရှိဘူး" လို့ ဝေါလီက ခပ်မိုက်မိုက် စိုက်ကြည့်ပြီး ပြောတယ်။
"သနားပါဦး၊ တည်းခိုခန်း ဆရာကြီးရယ်။ ဒါ၊ ကျွန်တော့် အမျိုးသမီး မာရိပါ။ သူ့မှာ ကိုယ်ဝန် အရင့်အမာကြီးနဲ့ပါ။ နားဖို့ လိုလို့ပါ။ သူ့အတွက် တနေရာစာလေး၊ ထောင့်တထောင့် ဖြစ်ဖြစ် ရနိုင်ကောင်းပါရဲ့ ခင်ဗျာ။ သူ တအား ပင်ပန်းနေလို့ပါ ဆရာကြီးရယ်"
ဒီအခါမှာတော့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် တည်းခိုခန်းပိုင်းရှင်ကြီး ဝေါလီဟာ သူ့ရဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း အမူအယာကို လျှော့ချလိုက်ပြီး မာရိကို ငုံ့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ကြည့်ပြီး အတော်ကြာအောင် ငြိမ်သက်သွားတယ်။ သူ ငြိမ်တာ ကြာသွားတော့ ပရိတ်သတ်လည်း နဲနဲ ကြောင်သွားတယ်။
"မရဘူး။ သွားကြ" လို့ ထောက်ပေးသူက ကုလားကာကြားက တိုးတိုးကလေး ထောက်ပေးတယ်။
"မရဘူး" လို့ ဝေါလီ ချက်ချင်း လိုက်ဆိုပါတယ်။ "သွားကြ"။
ယောသပ်က ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ မာရိကို သိုင်းဖက်လိုက်ပါတယ်။ မာရိကလည်း သူ့ခေါင်းကို ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ ပခုံးအပေါ်မှာ မှီထားလိုက်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက် ထွက်သွားစ ပြုပြီ။ တည်းခိုခန်းပိုင်းရှင်က ပြန်မဝင်သေးဘူး။ တံခါးဝမှာ ဆက်ရပ်နေတုန်းပဲ။ ကယ်သူမဲ့တဲ့ ဇနီးမောင်နှံကို ဆက်ကြည့်နေဆဲပဲ။ သူ့ ပါးစပ်က အဟ သား။ နဖူးကြောက စိုးရိမ်စိတ်ကြောင့် ရှုံ့မဲ့နေပြီ။ သူ့ မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်တွေ ပီပီပြင်ပြင် ပြည့်လျှံလာတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ရုတ်တရက် ဆိုသလို အခုပြဇာတ်က တခြားခရစ်စမတ် ပြဇာတ်တွေနဲ့ မတူတော့ပဲ ပုံစံကွဲသွားပါတယ်။
"ယောသပ်၊ မသွားနဲ့တော့" လို့ ဝေါလီ လှမ်းခေါ်လိုက်ပြီ။ "မာရိကို ပြန်ခေါ်ခဲ့"။ ဝေါလေ့ ပန်လင်းရဲ့ မျက်နှာဟာ တဖြည်းဖြည်း တောက်ပစွာ ပြုံးလာတယ်။ "မင်းတို့ ငါ့အခန်းကို ယူကြ"။
"ပြဇာတ်တော့ ပျက်ပြီ" လို့ မြို့က လူတချို့က ထင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့- အတော် များများ တချို့ကတော့ သူတို့ ကြည့်ဖူးသမျှထဲမှာ ဒီခရစ်စမတ် ပြဇာတ်ဟာ အကောင်းဆုံးပဲ လို့ မှတ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ ။
(ဒီ ဝတ္ထုတိုကလေး ဖတ်ပြီး အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေကို တတ်နိုင်သမျှ ကူညီနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။)
(THE SWORD OF THE LORD, December 17, 2004 စာစောင်မှ ဘာသာပြန်ပါတယ်။) Pa. (November 14, 2010)
Posted by Papa at 12:41 AM
Labels: ကဗျာ၊ ၀တ္တု, ခရစ်စမတ်
၁။ အပြုအမူ နှေးလွန်းခြင်း (သို့) သွက်လွန်းခြင်း (Hyper activity)
၂။ ဒေါသထွက်လွယ်၊ စိတ်ဆိုးလွယ်ခြင်း။
၃။ စိုရိမ်းလွန်ကဲ၊ ကြောက်ရွံ့တတ်ခြင်း။ ဆူညံသံ၊ ရုတ်တရက် ပြေးလွှားအော်ဟစ်ခြင်း၊ အသေးအမွှား ကိစ္စများကိုပင် သည်းမခံနိုင်ခြင်း။ စိုးရိမ်ခြင်းဟာ သွေးလှည့်ပတ်မှု၊ နှလုံး၊ အကြိတ်များ၊ အာရုံကြောများ ထိခိုက်စေပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဒာကို အဆိပ်အတောက်များ ဖြန့်ကျက်စေတယ်။ အကြိတ်များ ဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ သွေးပြွန်ကြောများ တောင့်မာစေပြီး၊ နှလုံးအားနည်းစေတယ်။ လူကို အမြန် အိုစာလာစေပါတယ်။
၄။ သွေးပေါင်ချိန်တက်ခြင်း/ ကျခြင်း။
၅။ စားချင်စိတ် အာသီသ ပျက်ခြင်း/ အစား လွန်ကဲခြင်း။
၆။ ရှင်းပြ၍ မရသော ကိုယ်ခန္ဓာ ဝေဒနာများ ဖြစ်ပေါ်တတ်ခြင်း။
- ခေါင်းကိုက်၊ ဗိုက်နာ၊ ကျောနာ၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း/ မူမမှန်ခြင်း။မူးဝေခြင်း၊ ဓမ္မတာ ခက်ခဲခြင်း။
၇။ အိပ်စက်မှု ပုံမှန်မဖြစ်ခြင်း။
- အိပ်မရ၊ အိပ်မက်အလွန်မက်ခြင်း၊ အိပ်မက်ဆိုး၊ အိပ်စက်မှု မူမမှန်မှု မျိုးစုံ။
၈။ သာမန် အပျော်အပါးနှင့် သွားလာလှုပ်ရှားမှုများကိုပင် စိတ်မဝင်းစားတော့ခြင်း။
၉။ မြော်လင့်ချက်မဲ့လာ၊ စိတ်ပျက် အားငယ် ငိုချင်လာခြင်း။
၁၀။ ကာမဂုဏ် စိတ်မဝင်စားခြင်း။
၁၁။ အာရုံစူးစိုက်မရခြင်း၊ မေ့တတ်လာခြင်း။ ဆုတောင်း၊ကျမ်းစာဖတ်ဖို့ပင် အာရုံမစိုက်နိုင်ခြင်း။
၁၂။ တန်ဖိုးမဲ့သလို ခံစားရပြီး၊ ကိုယ့်အပြစ်၊ကိုယ့်အားနည်းမှုများကိုသာ အမြဲတွေးနေတတ်ခြင်း။
၁၃။ ဘုရားသခင်နှင့် ဝေးနေသလို ခံစားရခြင်း။
လက်တွေ့ကျင့်သုံးရန် Practical pointer
၁။ ငြင်းတတ်ဖို့ သင်ယူလေ့ကျင့်ပါ။ Learn to say "No". တခုခုလုပ်ဖို့ တောင်းဆိုလာရင် ပြန်မဖြေခင် အရင်စဉ်းစားပါ။ ဘုရားအလိုတော်လား။ သူတပါး စိတ်ကြေနပ်အောင် လိုက်လျောနေတာလား။
၂။ ကိုယ်စား ခိုင်းလိုက်ပါ။ Practice delegating. အရာရာကို ကိုယ်လုပ်မှ ပြီးတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့။
၃။ စုံလင်ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ - Stop striving for perfection. တချို့အလုပ်တွေက အရမ်းကြိုးစားဖို့ မတန်ဘူး။ ကိုယ်က လူပဲ။
၄။ တချို့ မြော်လင့်ချက်တွေကို လျှော့ချပါ။ Reduce your expectations of others.
တခြားသူတွေကို အားမရ ဖြစ်မနေပါနဲ့။ ကိုယ်က ဘုရားမဟုတ်ဘူး။ ဘုရားသခင်ရဲ့ လက်ထောက်လည်း မဟုတ်ဘူး။ သူတို့လည်း လူတွေပါ။ မစုံလင်ဘူး။ ခွင့်လွှတ် နားလည်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
၅။ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ။ Take care of your health. အစားအသောက် ဂရုစိုက်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်း နေ့တိုင်းလုပ်ပါ။ (လမ်းလျှောက်တာဟာ ကိုယ်ရော၊ စိတ်ပါ ကျန်းမာစေပါတယ်။) လိုအပ်ရင် ဆရာဝန်ထံ ပြသပါ။ လူကြီးတွေဟာ တနေ့ အိပ်ချိန် ဂနာရီ မှ ၉နာရီ အထိ ရှိသင့်ပါတယ်။
၆။ တပတ်မှာ တရက်တော့ ဥပုဒ်နေ့လိုပဲ နားလိုက်ပါ။ တနေ့တည်းမှာပဲ နည်းနည်း နည်းနည်း အချိန်ယူ နားတတ်ပါစေ။ ကျမ်းစာဖတ်၊ အသီးဖျော်ရည်သောက်၊ သီချင်းတပိုဒ်လောက် ညည်းကြည့်ပါ။ ကြည်နူးစရာ ပုံပြင်၊ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းကလေးတွေ ဖတ်ပါ။ ခဏလည်စရာ နေရာတခုကို ရှာပါ။ ပန်းပင်စိုက်ပါ။ ခိုးအိပ်တတ်ပါစေ။ နာမည်ကြီး ကျမ်းစာဆရာ Dr. Warren W. Wiersbe က "တခါတလေ ကိုယ်အလုပ်နိုင်ဆုံး ဘုရားတရားအလုပ် Spiritual work ဟာ တရေး အိပ်ခြင်းဖြစ်နေတတ်တယ်" လို့ ဆိုပါတယ်။ ကိုယ်တရေး အိပ်လို့ ကမ္ဘာကြီး ပျက်းစီးမသွားပါဘူး။ ဘုရားသခင် ထိန်းချုပ်ပေးနေဆဲပါ။
၇။ စိုးရိမ်ခြင်းရှိသမျှကို ဘုရားသခင်ထံ အပ်နှံပါ။ သခင်ယေရှုက "ဝန်လေး၍ ပင်ပန်းသောသူအပေါင်းတို့ ငါ့ထံသို့လာကြလော့။ ငါသည် ချမ်းသာပေးမည်။ ငါ့ထမ်းပိုးကို တင်၍ထမ်းကြလော့။ ငါ့ထံ၌ နည်းခံကြလော့။ ငါသည် နူးညံ့သိမ်မွေ့နှိမ့်ချသော သဘောရှိ၏။ သင်တို့ စိတ်နှလုံးသည် သက်သာခြင်းကို ရလိမ့်မည်။" မဿဲ ၁၁း ၂၈- ၃၀။
စိတ်ဖိစီးမှုဟာ နှလုံးရောဂါပြီးရင် ကမ္ဘာမှာ ဒုတိယအဖြစ် အများဆုံးရောဂါပါ။ ကျမ်းစာထဲက လူကောင်းတွေလည်း စိတ်ဖိစီးမှု ခံစားခဲ့ကြရပါတယ်။ ဥပမာ- ဒါဝိဒ်မင်း။ အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီးတွေမှာ ၆ ဆ ပိုတွေ့ရပါတယ်။ အမျိုးသမီးတိုင်းလိုလို အပျော့စား စိတ်ဖိစီးမှု(Mild depression) ကြုံရတတ်ပါတယ်။ သားသည်အမေတွေမှာတော့ Baby Blues ဆိုတဲ့ သွေးနုသားနု သွေးလေ ချောက်ခြားတာ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒါက မကြာခင် ပြန်ပျောက်တတ်ပါတယ်။
ဆာလံကျမ်းကိုဖတ်ရှုခြင်းဟာ ဘုရားသဘာဝ၊ ဘုရားသဘော၊ ဘုရားဂုဏ်တော်၊ ဘုရားသစ္စာ၊ ဘုရားမေတ္တာ၊ ဘုရားရဲ့ အတူရှိနေခြင်းတွေကို နားလည်လာစေပါတယ်။ "အို- ငါ့ဝိညာဉ်၊ သင်သည် အဘယ့်ကြောင့် ညှိုးငယ်သနည်း။ ငါ့အထဲမှာ အဘယ့်ကြောင့် မငြိမ်မဝပ်ရှိသနည်း။ ဘုရားသခင်ကို မြော်လင့်လျှက်နေလော့။ ငါ့ကို ကယ်တင်တော်မူသောအရှင်၊ ငါကိုးကွယ်သော ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို ငါ ချီးမွှမ်းထောပနာ ပြုရလေအံ့သတည်း။" ဆာလံ ၄၂း ၁၁။ - - - - who is the HEALTH of my Countenance and my God. ("ငါ့ ရုပ်ရည်ကို ကျန်းမာစေတဲ့ ဘုရားသခင်" လို့ ဆိုလိုပါတယ်။)
Posted by Papa at 12:20 AM
The functions and Foods of Vitamins and Minerals
Vitamin A = အဖျားအနာကို ခုခံပေးသည်။ အရိုး၊သွား၊ဆံပင်၊ လက်သည်း၊ အရေဖျားတို့ကို အားဖြစ်စေသည်။ မျက်စိကြည်စေသည်။ (မုန်လာဥ၊ အစိမ်းရောင်နှင့် အဝါရောင် ဟင်းရွက်များ၊ ဥများ၊ အာလူးအချိုနှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများတွင် ပါဝင်သည်။)
Vitamin B1 = ဦးနှောက်၊ မျက်စိ၊ ဆံပင်နှင့် နှလုံးကို အားတိုးစေသည်။ ပိုးမွှားကိုက်ခြင်းကို သက်သာစေသည်။ အစာကြေစေသည်။ (ဝက်သား၊ အသီးအနှံများ၊ နေကြာစေ့နှင့် ပဲစေ့ ပဲတောင့်များတွင် ပါဝင်သည်။)
Vitamin B2 = အသားမျှင် Tissue များကို ကြီးထွားရန် အားပေးသည်။ အရေပြား၊ လက်သည်းနှင့် ဆံပင်ကို ကျန်းမာစေသည်။ (မှိုများ၊ နို့၊ အသား၊ ငါး၊ ဥ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များတွင် ပါသည်။)
Vitamin B3 = ကိုယ်စိတ် နှစ်ပါး ကျန်းမာစေသည်။ ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို လျှော့ပါးစေသည်။ (အစိမ်းရောင် ဟင်းရွက်များ၊ အစေ့အနှံများ၊ ပဲတောင့်များ၊ ဥများ၊ ငါးနှင့် အသားတို့ တွင် ပါဝင်သည်။)
Vitamin B6 = ပရိုတိန်းပါသော အစာများကို အမိုင်နို အက်စစ် (Amino) အဖြစ် ပြောင်းလဲစေသည်။ အစာကြေစေသည်။ အကြောတက်ခြင်း၊ အကြောဆွဲခြင်းကို လျှော့ပါးစေသည်။ (ပျားရည်၊ တဆေး၊ ပဲဖတ်၊ အာလူး၊ ဟင်းရွက်စိမ်းများနှင့် ငါးတို့တွင် ပါဝင်သည်။)
Vitamin C = အဖျားအနာ ကာကွယ်သည်။ အရိုး၊သွား၊ သွားဖုံးတို့ကို သန်မာစေသည်။ သွေးသန့်စေသည်။ (ငရုတ်ကောင်း အချို၊အနီ၊ အစိမ်း၊ လိမ်မော်၊ရှောက် - - စသည့် အသီးများ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ အာလူး၊ ဟင်းရွက်စိမ်းတို့တွင် ပါသည်။)
Vitamin D = အရိုးနှင့် သွားတို့ကို ခိုင်မာကြီးထွားစေသည်။ သွေးလှည့်ပတ်မှုကို ကူညီသည်။ အအေးမိခြင်းကို Vitamin A နှင့် C တို့ဖြင့် ပူးပေါင်း ကာကွယ်ပေးသည်။ (နို့၊ Tuna ငါး၊ Salmon ငါး၊ ငါးကြီးဆီ၊ ဥများနှင့် ထောပတ်တို့တွင် ပါသည်။)
Vitamin E = အနာကျက်စေသည်။ သွေးအားကောင်းစေသည်။ အဆုတ်ကို ကာကွယ်သည်။ (ဟင်းရွက်စိမ်းများ အာလူး၊ နို့၊ ပဲ တို့တွင် ပါသည်။)
Vitamin K = သွေးခဲစေသည်။ ဒဏ်ရာ အနာကျက်စေသည်။ (အစေ့အနှံများ၊ ဟင်းရွက်စိမ်းများ၊ အသည်း၊ ဥများနှင့် အာလူးတို့တွင် ပါသည်။)
Iron (သံဓါတ်) = အဆုတ်နှင့် ကြွက်သားမျှင်များသို့ အောက်စီဂျင် ပို့ပေးသည်။ ကယ်လ်စီယမ်နှင့် ကြေးဓါတ် Copper ကို ခန္ဓာကိုယ်မှ စုတ်ယူရန် ကူညီသည်။ (ဟင်းနုနွယ်၊ အသားများ၊ ချယ်ရီသီး၊ အစေ့အနှံနှင့် အသီးခြောက်များတွင် ပါသည်။)
Calcium (ကယ်လ်စီယမ်) = အရိုးနှင့် သွားတို့ကို တိုးပွါးစေသည်။ နှလုံးကြွက်သားများကို အလုပ်လုပ် လုပ်ဆောင်ရန် ကူညီသည်။ (အစေ့အနှံများ၊ ဟင်းရွက်စိမ်းများနှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းတို့တွင် ပါသည်။)
Magnesium (မဂ္ဂနီစီယမ်) = အာရုံကြောကို တည်ငြိမ်စေသည်။ အိပ်ပျော်စေသည်။ အစာကြေစေသည်။ အရိုးနှင့် သွားတို့ကို သန်မာစေသည်။ (အစေ့အနှံငယ်များ၊ ထောပတ်သီး၊ ဟင်းရွက်စိမ်း၊ အခွံမာသီးများ၊ စပျစ်သီး၊ ဘယ်ရီသီး( အစေ့ပါသော အရည်ရွန်းသီးများ) တွင်ပါသည်။)
Zinc (သွပ်) = အရိုးနှင့် သွားတို့ကို တိုးပွါးစေသည်။ ဆံပင် အားကောင်းစေသည်။ ရွှေဖရုံစေ့၊ အစေ့အနှံငယ်များ၊ အသည်း၊ ပဲစေ့၊ ပဲတောင့်၊ အကြေးခွံပါသောငါးတို့တွင် ပါသည်။)
Vitamins နှင့် Minerals တို့၏ ကွာခြားချက်
Vitamins တို့သည် ကိုယ်ခန္ဓာတွင် နဲနဲသာလိုသည့် ပုံစံရှိ အရာများ ဖြစ်သည်။ အသက်ရှင်ရန် မရှိမဖြစ် လိုသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာထဲ၌ အတုဖန်တီး၍ မရနိုင်ပါ။
Minerals (သတ္တုဓါတ်များ) သည် သဘာဝထဲရှိ ပုံမဲ့အရာများ ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ခန္ဓာရှိ အသားမျှင် Tissue များနှင့် အရည်များကို ဖြစ်စေသည်။ Tissue များနှင့် အရည်များက Vitamins ၊ ဟိုမုန်း၊ အင်ဇိုင်းတို့နှင့် ပူးတွဲ အလုပ်လုပ်ကြသည်။
# သင့်တော်သော အစာကိုစားပါ။ Vitamin များလျှင် အန္တရာယ်ရှိသည်။
Posted by Papa at 12:17 AM
Acid, Neutral, Alkaline အက်စစ်၊ အယ်လ်ကာလိုင်း၊ ကြားနေ
ACID Foods အက်စစ် NEUTRAL Foods ကြားနေ ALKALINE Foods အယ်ကာလိုင်း
All fried foods အကြော်စာ Apples ပန်းသီး Asparagus, Alfalfa ကညွတ်
Aspirin အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး Apricots တရုတ်ဇီးသီး Blackberries
Beef အမဲသား Bananas ငှက်ပျောသီး Broccoli ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း
Beer ဘီယာ Beans ပဲတောင့်များ Cantaloupe သခွါးမွှေးသီး
Butter ထောပတ် Blueberries Celery တရုပ်နံနံ
Candy သကြားလုံး Buckwheat Cinnamon သစ်ကြံပိုးခေါက်
Cheese ဒိန်ခဲ Cauliflower ပန်းဂေါ်ဖီ Coffee substitutes ကော်ဖီအစားထိုး
Chocolate, Cocoa ချောကလက်၊ကိုကိုး၊ Cherries ချယ်ရီ Endive. Garlic ကြက်သွန်ဖြူ
Coffee ကော်ဖီ Dates စွံပလွန်သီး Grapefruit ဂရိတ်ဖရုသီး
Corn, Cranberries ပြောင်း၊ဘယ်ရီအနီ Eggplants ခရမ်းသီး Horseradish သင်္ဘောဒန့်သလွန်
Ginger ဂျင်း Eggs ဥများ Kale, Kohlrabi ရွက်လိပ်ဂေါ်ဖီ
Ham ဝက်သားခြောက် Flaxseed oil ကြိတ်ဆီ Lentils ပဲတမျိုး
Jam, jelly ယို၊ ဂျယ်လီ Figs သဖန်းသီး Lemons, Limes ရှောက်၊သံပုရာ
Ice Cream ရေခဲမုန့် Fish ငါး Mangoes သရက်သီး
Lobster ပုဇွန်ထုပ် Goat cheese ဆိတ်နို့ခဲ Mineral water ဓါတ်ဆားရည်
Macaroni ကြာဇံ Grapes စပျစ်သီး Molasses သကာရည်
Mayonnaise အချဉ်ရည်တမျိုး Honey ပျားရည် Mustard greens မုန်ညှင်းရွက်
Milk နို့ Honeydew သခွါးသီး Nectarines မက်မွန်သီး
Mussels ဂုံးအမည်း Lettuce ဆလပ်ရွက် Nuts, not roasted သစ်စေ့အစိမ်း
Nuts, roasted သစ်စေ့လှော် Maple Syrup သကြားသီးရည် Okra ရုံပတီသီး
Oatmeal လူး၊ဆပ် Olive oil သံလွင်ဆီ Onions ကြက်သွန်နီ
Oils (Hydrogenated) ဆီ Oranges လိမ္မော်သီး Papayas သင်္ဘောသီး
Pies & pastry သစ်သီးမုန့် Peaches မက်မွန်သီး Parsley ဟင်းမွှေးရွက်
Peas, Pork ပဲ၊ ဝက်သား Pears သစ်တော်သီး Peppers ငရုတ်ကောင်း
Prunes ဇီးသီးခြောက် Pineapple နာနတ်သီး Potatoes အာလူး
Rice, Rye bread ဆန်၊ ဆန်မုန့် Plums ဇီးသီး Radish မုန်လာဥ
Sauces အချဉ်ရည် pumpkin ဖရုံသီး Raspberries
Scallops, Shrimp ဂုံး၊ပုဇွန်ဆိတ် Raisins စပျစ်သီးခြောက် Sauerkraut မုန်လာ-ဂေါ်ဖီ
Soybeans ပဲပိစပ် Rice (Wild, Brown) ဆန်လုံးညို Sea salt ရိုးရိုးဆား
Soy milk ပဲနို့ရည် Strawberries စထရော်ဘယ်ရီသီး Sweet potatoes ကန်စွန်းဥ
Spaghetti နန်းကြီး၊မြီးရှည် Turkey ကြက်ဆင် Tangerines ပျားလိမ္မော်
Sugar သကြား Tumips
Vanilla နံ့သာပု Watermelon ဖရဲသီး
Veal နွားကလေးသား Yams မျောက်ဥ
Vinegar ရှာလကာရည် Yogurt ဒိန်ချဉ်
Antibiotics are also acidic as are artificial sweeteners. ပိုးသတ်ဆေးဝါးနှင့် သကြားအစားထိုး အချိုတုများသည် အက်စစ်ဖြစ်သည်။
Posted by Papa at 12:15 AM
What must I do to be saved? Part I ကယ်တင်ခြင်း
What Must I Do To Be Saved? (Part I)
By Evangelist John Rice
အကယ်ခံရဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲ? အရိုးဆုံး၊ အရှင်းဆုံး လူတိုင်းသိသင့်တဲ့ မေးခွန်းကလေးပါ။ ဒါမသိရင်၊ ဘုရားနဲ့ ထာဝရ ဝေးကွာပြီး ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ဝေဒနာတွေပဲ ခံစားရတော့မှာပါ။ လူတိုင်း နားလည်နိုင်တဲ့ မေးခွန်းနဲ့အတူ အဖြေကလေးကိုတွဲပြီး ကျမ်းစာထဲမှာ ရေးထားပေးတာကတော့ ဘုရားကျေးဇူး ချီးမွှမ်းစရာပါ။ ကျမ်းစာထဲမှာ ဝိညာဉ်ရေးနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ တခြားမေးခွန်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကယ်တင်ခြင်းကို ရှင်းရှင်းကလေး ပြောပြထားတဲ့ ကျမ်းပိုဒ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာသာ ကွက်တိမေးပြီး အဖြေကိုလည်း တပါတည်း တွေ့ရတာပါ။
ပေါလုနဲ့ သိလက ဖိလိပ္ပိမြို့ ထောင်ထဲမှာ၊ ညသန်းကောင်အချိန် သီချင်းဆို ဆုတောင်းကြတော့ မြေငလျင်လှုပ်ပြီး ထောင်တံခါးတွေပွင့်၊ သံခြေကျင်းတွေ ကျွတ်ကျကုန်တယ်။ထောင်မှူးခမျာ ကြောက်လန့်ပြီး၊ ကိုယ့်အပြစ်ကို မြင်လာတယ်။ ဆရာ နှစ်ပါးထံ ရောက်လာပြီး ဒီမေးခွန်းကို မေးတော့တာပဲ။ တမန် ၁၆း ၂၉-၃၁ ကို ဖတ်ကြည့်ပါဦး။
"ထောင်မှူးသည် ညှိထွန်းသောမီးကို တောင်းပြီးမှ ပြေးဝင်၍၊ ပေါလုနှင့်သိလတို့၏ ခြေရင်း၌ တုန်လှုပ်လျက် ပြပ်ဝပ်လေ၏။- သူတို့ကို ပြင်သို့ ထုတ်ပြီးလျှင်လည်း၊ သခင်တို့၊ အကျွန်ုပ်သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်အံ့သောငှါ အဘယ်သို့ ပြုရပါမည်နည်းဟု မေးလျှောက်လေ၏။- ထိုသူတို့ကလည်း၊ သခင်ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်လော့။ ယုံကြည်လျှင် သင်နှင့် အိမ်သူအိမ်သားတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ကြလိမ့်မည်။"
"အကယ်ခံရဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲ?" "သခင်ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်လော့။ - - - ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ကြလိမ့်မည်။" ဒါက ဘုရားသခင်ရဲ့ ကယ်တင်တဲ့နည်းလမ်းပဲ။ ယောင်္ကျား၊ မိန်းမမရွေး၊ ကလေးသူငယ်ပါမကျန် တကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိတဲ့သူတွေကို ကယ်တင်တဲ့ တခုတည်းသော နည်းပဲ။
လုပ်ရမှာ တခုရှိပါတယ်။ ထောင်မှူးမှာ မြော်လင့်စရာရှိလာတာက ကိုယ့်အပြစ်ကို မြင်ပြီး၊ ဘာလုပ်ရမလဲလို့ မေးလာတာပါပဲ။ လူဟာ အပြစ်သားဆိုတာ ကျမ်းစာအစကနေ အဆုံးထိ ထောက်ပြနေပါတယ်။ ဟေရှာယ ၅၃း ၆ မှာ - - -
"ငါတို့ရှိသမျှသည် သိုးကဲ့သို့ လမ်းလွဲလျက်၊ ကိုယ်လမ်းသို့ အသီးသီး လိုက်သွားကြသည်ဖြစ်၍ ထာဝရဘုရားသည် ခပ်သိမ်းသော ငါတို့၏ အပြစ်များကို သူ့အပေါ်၌ တင်တော်မူ၏။"
အာလုံး လမ်းလွဲနေတာပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် လူကောင်းလို့ ထင်နေဖို့ ဘုရားအလိုတော် မရှိဘူး။ ရောမ အခန်းကြီး ၃ မှာ ယောင်္ကျား၊ မိန်းမမရွေး၊ ကလေးပါမကျန် အပြစ်ရှိတယ်လို့ ကျမ်းစာက အသေအချာ ပြောပါတယ်။
"ထိုသို့ဖြစ်လျှင် အဘယ်သို့နည်း။ ငါတို့သည် မြတ်သလောဟု မေးပြန်သော်၊ အလျှင်းမမြတ်။ အကြောင်းမူကား၊ ယုဒလူ၊ ဟေလသလူ အပေါင်းတို့သည် အပြစ်ရှိကြောင်းကို အထက်က ပြခဲ့ပြီ။ ကျမ်းစာလာသည်ကား ဖြောင့်မတ်သောသူမရှိ။ တယောက်မျှ မရှိ။- နားလည်သောသူ မရှိ။ ဘုရားသခင်ကို ရှာသောသူ မရှိ။- လူအပေါင်းတို့သည် လမ်းလွဲကြပြီ။ တညီတညွတ်တည်း အသုံးမရသောသူ ဖြစ်ကြပြီ။ ကောင်းသောအကျင့်ကို ကျင့်သောသူ မရှိ၊ တယောက်မျှ မရှိ။-"
"ခြားနားခြင်း အလျှင်းမရှိ။- အဘယ်ကြောင့်နည်းဟူမူကား၊ လူအပေါင်းတို့သည် ဒုစရိုက်ကို ပြု၍ ဘုရားသခင့်ရှေတော်၌ အသရေပျက်ကြပြီ။" လို့ အငယ် ၂၂ နဲ့ ၂၃ မှာ ထပ်ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် သခင်ယေရှုက နိကောဒင်ကို ယောဟန် အခန်းကြီး ၃ မှာ "ဒုတိယမွေးခြင်းကို ခံရမည်ဟု ငါဟောပြောသည်ကို အံ့သြခြင်းမရှိနှင့်။" လို့ ပြောရတာပါ။ အငယ် ၁၈ မှာတော့ သခင်ယေရှုကို မယုံကြည်သူဟာ အပြစ်စီရင်ခြင်းခံထားရပြီလို့ ပြောပါတယ်။
ဒီကျမ်းချက်တွေအရ လူတိုင်းဟာ အပြစ်သား၊ သခင်ယေရှုခရစ်ကို မယုံမချင်း၊ ကယ်တင်ခြင်းမခံရမချင်း အပြစ်သား ဖြစ်နေဦးမှာပဲလို့ ရှင်းရှင်းလေး ပြောထားပါတယ်။ စိတ်နှလုံးက မှားနေတယ်။ ဘုရားသခင်က မှန်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ အကယ်ခံချင်ရင် "အပြစ်ရှိပါတယ်၊ လွဲနေပါပြီ၊ အကယ်ခံရဖို့ လိုပါတယ်" လို့ စိတ်ထဲက ဝန်ခံရပါမယ်။ အပြစ်သားပါလို့ ဝန်ခံပြီးမလာရင် ဘယ်သူမှ အကယ်ခံရမှာ မဟုတ်ဘူး။
လူကောင်းတွေအတွက် မဟုတ်၊ အပြစ်သားတွေအတွက်သာ ခရစ်တော် အသေခံပေးခဲ့တာပါ။
အပြစ်သားဆိုတာ ငရဲကို ဦးတည်နေတယ်။ စိတ်နှလုံးက မဲညစ်နေတယ်။ စိတ်ကလည်း မာအောင်လုပ်ထားတယ်။ ဘုရားခေါ်တာကို ငြင်းဆန်နေတယ်။ ဘုရားကို ပစ်ပယ်ထားတယ်။ လူ့အမြင်မှာ ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းနေပါစေ၊ ဘုရားသခင်ထံ လှည့်မပြန်ရင် စိုးရိမ်စရာ အပြစ်သား၊ ငရဲသွားဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။ အပြစ်သားပါလို့ ဘုရားသခင်ထံ စိတ်နှလုံးနဲ့ ဝန်ခံပါ။ တခြားအရာတွေထက် လောကမှာ အရေးတကြီးလိုနေတာက ကယ်တင်ခြင်းပါ။
ဒီအကြောင်းကို စဉ်းစားပြီဆိုရင်တော့ "အကယ်ခံရဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲ" ဆိုတဲ့ မေးခွန်းအတွက် ဘုရားပေးတဲ့ အဖြေကို သိလာနိုင်ပါတယ်။
လွယ်လွယ်ကလေးပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မကယ်နိုင်ဘူး။ ကယ်နိုင်တဲ့ သခင်ယေရှုကို အားကိုးရုံပါပဲ။ အားကိုးရင် ဘုရားဂတိတော်က "ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မယ်"။ ဘုရားသခင်ရှိတယ်၊ ကယ်တင်ရှင်ရှိတယ် ယုံလိုက်လို့ အလွယ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါမျိုးတော့ နတ်ဆိုးတွေတောင် ယုံပြီး၊ ကြောက်ကြတယ်။ (ယာကုပ် ၂း ၁၉) ဆရာဝန်တယောက်၊ ကိုယ်ဖျားနာရင် သူ့ကို မခေါ်ပဲ၊ သူ သိပ်တော်တယ်လို့ ယုံနိုင်ပါတယ်။ ရှေ့နေတယောက်ကို ကိုယ့်အမှုမှာ သူ့ကို မခေါ်ပဲ၊ သူတော်တယ်လို့ ယုံလို့ရပါတယ်။ သခင်ယေရှုရဲ့ အကြောင်းကို ယုံဖို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ သူ့ကို ယုံကြည်အားကိုးရ၊ အမှီပြုရ မှာပါ။ ဒါဆို ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီ။
ကောင်းမှု ကုသိုလ်တွေကြောင့် မဟုတ်ဘူး။
ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာ ထိုက်တန်လို့ ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ဘာလုပ်လုပ် မထိုက်တန်ဘူး။ ပညတ်တော်ဆယ်ပါးစောင့်ထိန်းမလား? ပညတ်တော်ကို လူတွေ ဖေါက်မိလျက်သားဖြစ်နေကြပြီလို့ ကျမ်းစာက ပြောထားပါပြီ။ ရောမ ၃း၂၀ က - - -
"ပညတ်တရားသည် ဒုစရိုက်ကို ထင်ရှားစေသည်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ပညတ်တရား၏ အကျင့်အားဖြင့် ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ အဘယ်သူမှ ဖြောင့်မတ်ရာသို့ မရောက်ရာ။"
အလားတူ၊ ဂလာတိ ၃း ၁၁၊ ၁၃ ကလည်း - - -
"ဖြောင့်မတ်သောသူသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်လိမ့်မည်။ - - ဘုရားသခင့် ရှေ့တော်၌ ပညတ်တရားအားဖြင့် အဘယ်သူမျှ ဖြောင့်မတ်ရာသို့ မရောက်နိုင်ဟု ထင်ရှားလျှက်ရှိ၏။"
လူရဲ့ ကောင်းတဲ့ အကျင့်တွေကြောင့် ကယ်တင်ခြင်း မရနိုင်ဘူးလို့ ပြောတဲ့ ကျမ်းစာချက်တွေ အများကြီး၊ အများကြီး ရှိပါတယ်။
"ငါတို့ ကျင့်သော ဖြောင့်မတ်ခြင်း အကျင့်အားဖြင့် မဟုတ်ပဲ၊ မိမိသနားခြင်း ဂရုဏာတော်နှင့်အညီ၊ ဒုတိယမွေးခြင်းနှင့်ဆိုင်သော ဆေးကြောခြင်းအားဖြင့်၎င်း၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ အသစ်ပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်း၊ ငါတို့ကို ကယ်တင်တော်မူ၏။" - တိတု ၃း၅ ။
"ယုံကြည်သောအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။ ကိုယ့်အလိုအလျောက် ရောက်သည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင် သနားတော်မူရာဖြစ်သတည်း။ ကိုယ့်ကုသိုလ်ကြောင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်သည်မဟုတ်။ သို့ဖြစ်၍ အဘယ်သူမျှ ဝါကြွားစရာ အခွင့်မရှိ။" ဧဖက် ၂း၈-၉။
မထိုက်တန်ဘူး၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကယ်လို့မရဘူးဆိုတာ ဝန်ခံကြရမှာပါ။ အခမဲ့ ပေးရင်၊ ပေး။ မပေးရင် မရပဲနေကြဖို့ပဲရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ အပြစ်ကြွေးဆိုတာ အသွေးနဲ့ဆေးရတာပါ။ ကျမ်းစာက - - -
"အသွေးမသွန်းလောင်းပဲ အပြစ်လွှတ်ခြင်းမရှိ။" ဟေဗြဲ ၉း၂၂။
"ငါတို့သည် အကျိုးနည်းရှိစဉ်တွင် ခရစ်တော်သည် မတရားသောသူတို့အတွက်ကြောင့် အသေခံတော်မူ၏။" - ရောမ ၅း၆။
"ငါတို့ရှိသမျှသည် သိုးကဲ့သို့ လမ်းလွဲလျက်၊ ကိုယ်လမ်းသို့ အသီးသီးလိုက်သွားကြသည်ဖြစ်၍၊ ထာဝရဘုရားသည် ခပ်သိမ်းသော ငါတို့၏အပြစ်များကို သူ့အပေါ်၌ တင်တော်မူ၏။" ဟေရှာယ ၅၃း၆။
အားလုံးကို အသွေးနဲ့ ရွေးဝယ်ထားတယ်လို့ ရှင်ပေတရုက ဆိုပါတယ်။
"မိစဉ်ဘဆက် ကျင်လည်သော အချည်းအနှီး ကျင့်ကြံပြုမူခြင်းမှ၊ ရွှေ၊ငွေ အစရှိသော ဖေါက်ပြန် ပျက်စီးတတ်သော ဥစ္စာနှင့် သင်တို့ကို ရွေးတော်မူသည်မဟုတ်။ - အဘယ်အပြစ်မှမရှိ၊ အညစ်အကြေးနှင့် ကင်းစင်သော သိုးသငယ်ကဲ့သို့သော ခရစ်တော်၏ အသွေးတော်မြတ်နှင့် ရွေးတော်မူသည်ကို သိမှတ်ကြလော့။" - ၁ပေ ၁း၁၈-၁၉။
ရှေးဓမ္မဟောင်းခေတ်ကာလမှာ သိုး၊နွား၊ဆိတ်၊ ချိုးငှက်တွေကို သတ်ပြီး ယဇ်ပူဇော်ရတာဟာ လူတွေရဲ့ အပြစ်အတွက် အပြစ်ကင်းသူတယောက်က အသွေးသွန်းပြီး ပေးဆပ်ရမယ်ဆိုတာကို ပုံဆောင်ပါတယ်။ သခင်ယေရှုက အသေခံပေးပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က လူတိုင်း အခမဲ့ ရနိုင်အောင် ရွေးဝယ်ပေးတာပါ။
"အပြစ်တရား၏ အခကား သေခြင်းပေတည်း။ ဘုရားသခင်ပေးသော ဆုကျေးဇူးတော်ကား ငါတို့ သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ထာဝရအသက်ပေတည်း။" - ရောမ ၆း၂၃။
အသင်းသားဖြစ်ရုံနဲ့ ကယ်တင်ခြင်းမခံရဘူး။ နှစ်ခြင်းခံလို့ အကယ်ခံရတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒါတွေက ခရစ်တော်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် သိပြီးသားလူတွေအတွက် လုပ်ရမယ့် တာဝန်တွေပါ။ ကောင်းကောင်းနေရုံနဲ့ လူကောင်းဖြစ်ရုံနဲ့ မရဘူး။"ငါတို့ ကျင့်သော ဖြောင့်မတ်ခြင်း အကျင့်အားဖြင့် မဟုတ်ပဲ၊ မိမိသနားခြင်း ဂရုဏာတော်နှင့်အညီ၊ - - ငါတို့ကို ကယ်တင်တော်မူ၏။" - တိတု ၃း၅ ။ ကိုယ့်လုပ်ရပ်တွေအပေါ်မှာ မမှီခိုနဲ့။ သခင်ယေရှုလုပပေးခဲ့တာနဲ့ ထားတဲ့ ဂတိအပေါ်မှာသာ မှီခိုပါ။
Posted by Papa at 11:58 PM
Labels: John R. Rice, တရား
Becky's Story ( REAL HOPE FOR TEENS ) 1
REAL HOPE FOR TEENS ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလေးကို ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းလေးတွေပါ။ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေအတွက် ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေ ရေးကြတာပါ။ Rev. Bob DeWitt, D.D. က တည်းဖြတ်ပါတယ်။ မူရင်းအင်္ဂလိပ်စာအုပ်ကို www.realhelpforteens.com 877-332-7333 မှာ တောင်းယူနိုင်ပါတယ်။
REAL HOPE FOR TEENS ဆယ်ကျော်သက်တို့အတွက် စစ်မှန်သော မြော်လင့်ခြင်း
WRITEN FOR TEENS BY TEENS
Becky's Story ဘက်ကီ့အကြောင်း
မိဘတွေ ကွာရှင်းကြတော့ ကမ္ဘာပျက်ပြီလို့ ထင်လိုက်တယ်။ အနည်းဆုံးတော့ ကျွန်မရဲ့ ကမ္ဘာကလေးပေါ့။ မိသားစု အတူတူ အပြင်ထွက် မလည်ရတော့ဘူး။ နွေနေ့လည်ခင်းအချိန်မှာ မိသားစုနဲ့အတူ ကွင်းတကွင်းမှာ ဘေ့စ်ဘော သွား မကစားရတော့ဘူး။ ကျွန်မလည်း အခန်းအောင်းပြီး၊ အပြင်မထွက်ချင်တော့ဘူး။ အပြင်ထွက်ရင် ပိုခံစားရမယ်လို့ ထင်မိတယ်။ အခန်းအောင်းလေလေ၊ ဘယ်တော့မှ မပျောက်ပျယ်တဲ့ ဝေဒနာ အရိပ်မည်းမည်း တိမ်တိုက်ကြီးက ဖုံးလွှမ်းသလို ခံစားလာရတယ်။ ညာသံပေးနေတဲ့ လူအုပ်ကြီးက ဝိုင်းနေတယ်လို့ ကျွန်မ ခံစားနေရတယ်၊ ကျွန်မအော်သံကို ဘယ်သူမှ မကြားကြပုံပဲ။ ကျွန်မတယောက်တည်း အားငယ်နည်းနေတယ်။
အမေက အဖေ၊ အကိုနဲ့ ကျွန်မတို့ကို ထားရစ်ခဲ့တဲ့အခါ ကျွန်မအသက် ၁၃ နှစ်ပါ။ အဲဒီတနွေလုံးဟာ ထိတ်လန့်စရာပါ။ ရုံးချိန်းရှိတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မပျော်ရတော့ဘူး။ နွေးထွေးတဲ့လေလည်း ပျော်စရာ မကောင်းတော့ဘူး။ ကျွန်မ ကြေကွဲနေပြီ။ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အဆိုးတွေကို တတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြည့်တယ်။ ဒါပေမယ့် တနေ့တနေ့ မျက်ရည်ကြားမှာပဲ နစ်- နစ်လာတော့တယ်။ ကျွန်မဆန္ဒကတော့ အားလုံးကို အရင်လိုပဲ ပြန်ဖြစ်စေချင်တာပါ။
အလယ်တန်းပြီးခါနီးနှစ်တွေမှာတော့ အပြင်ပန်းကတော့ အဆင်ပြေနေသလိုပါ။ အမေလာလည်ပေမယ့် ကျွန်မစိတ်မှာ တအား နာကြင်နေဆဲဆိုတော့ ခံစားရခက်ပါတယ်။ အမေနဲ့ သမီးဆိုတဲ့ ဘဝအရသာကို အလုခံလိုက်ရတာပါ။ စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက်ထဲမှာပဲ နေချင်တော့တယ်။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့ဘဝကို ကြည့်ဖြေရှင်းရဦးမှာပါ။
ရှစ်တန်းရောက်တော့ တနှစ်တာ "အကောင်းဆုံး ကျောင်းသူဆု" ရတယ်။ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေက အတန်းထဲက သူတို့ အကြိုက်ဆုံး၊ နာမည်အရဆုံး တယောက်ကို ရွေးကြတာ။ အဲဒီမှာ ကျွန်မကို ရွေးကြတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဲဒီလောက် နာမည်ရတယ်လို့ တခါမှ မထင်ပေမယ့် ၊ သူငယ်ချင်းတွေတော့ အများကြီးရှိနေခဲ့ပါတယ်။ အုပ်စုဖွဲ့နေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလို့တော့ မရှိခဲ့ဘူး။ ပုံစံစုံ၊ အရောင်စုံ သူငယ်ချင်းတွေပဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။ လူတွေကို သိချင်လာပေမယ့် လူတွေက ကျွန်မကို နားမလည်ကြဘူး။ အပေါ်ယံကတော့ ကျွန်မ ရီလို့၊ မောလို့ပါ။ အတွင်းမှာတော့ နေရောင်မရ ၊ ရေမရလို့ အသက်ငင်နေတဲ့ နှင်းဆီတပွင့်ပါ။ အပြင်မှာ ပျော်ပုံ၊ ရှင်သန်နေပုံရပေမယ့်၊ အတွင်းမှာတော့ သေနေပြီ။
အလယ်တန်းပြီးစ နွေရာသီဟာ အကုန်မြန်ခဲ့ပါတယ်။ သာမန်နွေရာသီလို့ပဲ မှတ်မိပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မက ဘဝကို ပျော်စရာကြီးလို့ပဲ ထင်ခဲ့တာ။ အကောင်းမမြင်တတ်တော့သလို၊ စိတ်ထားလည်း အကောင်း မထားတတ်တော့ဘူး။ အဲဒီကာလဟာ ကျွန်မအတွက်တော့ တစ္ဆေတကောင်ရဲ့ ရီဝေဝေ ညမျိုးပါ။ နည်းနည်းပါးပါး စူးစမ်းချင်၊ လေ့လာချင်လာပေမယ့် ဘာမှ ပျော်စရာကောင်းမလာခဲ့ဘူး။ စိတ်ဖြေချင်ပေမယ့် ဖြေစရာမရှိခဲ့ဘူး။ ရှင်လျှက်နဲ့ သေနေသလိုပါ။ ယုံကြည်ရတဲ့ မိတ်ဆွေလည်း နည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်။ တချို့ဆို သောက်စား၊ အဖေါ်နဲ့ တွဲရုံမက ထင်ရာစိုင်းနေသူတွေပါ။ ကျွန်မကတော့ အဲဒီ နယ်ခြားမျဉ်းဘေးမှာ ကိုယ့်အလှည့်မရောက်ခင် စိတ်ဝင်တစား ထိုင်ကြည့်နေတဲ့ အရံဘောလုံးသမားလို၊ နံရံထက်ကပန်းတပွင့်လို ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အရာရာမှာ စိတ်မပါပဲ၊ အရာမဝင်သလို ခံစားခဲ့ရတယ်။
အဲဒီနောက် အထက်တန်းကျောင်းတက်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမနှစ်မှာ အေမီနဲ့ တွဲဖြစ်တယ်။ ရှစ်တန်းတုန်းကလည်း တွဲခဲ့ပေမယ့် ဘယ်ကျောင်းဆက်တက်မလဲ မသေချာခဲ့ကြဘူး။ အခု ကျောင်းတူတော့ သိပ်ပျော်ပါတယ်။ အခြေအနေ ပိုကောင်းလာတယ်။
အေမီက သူတက်လေ့ရှိတဲ့ ဘုရားကျောင်းကို ခေါ်တယ်။ ကျွန်မက အကြောင်းတခုခု ပြပြီး ငြင်းတယ်။ အေးချမ်းတဲ့ ဒီဇင်ဘာလမှာတော့ လူငယ် အားသစ်လောင်း သင်တန်းတခုကို လိုက်သွားလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီက လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ကျွန်မ အဆင်မပြေဘူး။ ကျွန်မရဲ့ အပြုအမူက မကောင်းသလို၊ ကိုယ့်အုပ်စုနဲ့ကိုယ် နေရမယ့် စည်းကယ်းလည်း မလိုက်နာပါဘူး။ နောက်လည်း မသွားချင်တော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် အေမီက ဘုရားကျောင်းတက်ဖို့ တိုက်တွန်းတာ ဘယ်တော့မှ မရပ်ဘူး။ ဒါနဲ့ နောက်တခါ လိုက်သွားပါတယ်။ သွားရမှာ ဝန်လေးနေဆဲပဲ။ ဒါပေမယ့် ကြောက်စိတ်ကို ရင်ဆိုင်လိုက်တယ်။
မတ်လရဲ့ အင်္ဂါည တညမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်တန်းကျောင်းက junior နဲ့ senior ကျောင်းသားအဖွဲ့တွေဟာ အနီးက ခရစ်ယာန်ကောလိပ်ကျောင်းသားတွေနဲ့ နိုးကြားရေး အစီအစဉ် ကျင်းပနေပါတယ်။ သီချင်းတွေကို သဘောကျမိတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတယောက်အကြောင်းရေးတဲ့ တချို့သီချင်းတွေက မကြားဖူးဘူး။ အဲဒီညမှာ ကောလိပ်ကျောင်းသားတယောက်က ဘုရားသားတော် သခင်ယေရှု လူတွေရဲ့အပြစ်အတွက် သစ်တိုင်မှာ အသေခံကြောင်း တရားဟောတယ်။ ဘုရားသခင်အကြောင်း သူဟောနေတုန်း ဆက်ထိုင်နေဖို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြောပေမယ့် စိတ်နှလုံးကြေကွဲလွန်းလို့ အသက်ရှူရတောင်ခက်လာတယ်။ ကျွန်မ ကယ်တင်ခြင်းမရသေးဘူး ထင်တယ်လို့ အေမီကို ပြောပြတယ်။ ကျွန်မသေရင် ဘယ်ရောက်မလဲလို့ မေးမိတယ်။ "အေမီ၊ ငါ ကြောက်တယ်" လို့ ပြောမိတယ်။ တုန်တုန်လှုပ်လှုပ် ငိုမိတယ်။ ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ်အသက်ရှင်နေမိတာ။ သခင်ယေရှု အသက်ရှင်ပေးနေတာမှ မဟုတ်ပဲ၊ အပြစ်သားဆိုတာ နောင်တရပြီး အသက်တာမှာ သခင်ယေရှုကို ဖိတ်ခေါ်ရမယ်။ အတွင်းမှာ ဆေးကြောခွင့် ပေးရမယ်။ အပြစ်တွေ ခွင့်လွှတ်ပါလို့ တောင်းပန်ဖို့ လိုလာပါတယ်။
စိတ်နှလုံးထဲမှာ သခင်ယေရှုကို လက်ခံလိုက်တဲ့ ညဟာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အရင်လို နာကြည်းမှုတွေ မရှိတော့ဘူး။ သိပ်တောင့်တခဲ့တဲ့ နှစ်သိမ့်မှုတွေဟာ ကျွန်မကို ရစ်ပတ်လွှမ်းခြုံထားလိုက်ပါပြီ။ စိုးရိမ်စိတ်တွေ၊ ကြောက်စိတ်တွေဟာ လွင့်ပါးခဲ့ပြီ။ ကလေးလေးလို ပြန်ဖြစ်သွားပြီ။ သခင်ယေရှုက ကားတိုင်ပေါ်မှာ အပြစ်ကြွေးတွေ ပေးဆပ်ခဲ့လို အဲဒီညမှာ အပြစ်ရှိသမျှ ဆေးကြောလိုက်ပြီ။
သခင်ယေရှုခရစ်က အသက်ရှင်ပုံကို ပြောင်းသွားစေပါတယ်။ စိတ်နှလုံးကို အမြင်ကြည်လင်စေပြီး၊ သန့်ရှင်းသူဖြစ်အောင် ဖန်ဆင်းလိုက်ပါတယ်။ ကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက် စိတ်လိုအင်ဆန္ဒတွေ ပြောင်းလာတယ်။ ကိုယ်သဘောအတိုင်း မဟုတ်ပဲ၊ ဘုရားအလိုတော်ရှာချင်လာတယ်။ ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်း ပြောပြချင်လာတယ်။ ခရစ်ယာန်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ မိတ်ဆွေဖွဲ့ချင်လာတယ်။ ရဖူးသမျှ လက်ဆောင်တွေထဲမှာ ကယ်တင်ခြင်းဟာ အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်ပဲ။ ကယ်တင်ခြင်းရဲ့ အကောင်းဆုံးအချက်ကလည်း အခမဲ့ ရတာပါပဲ။
ဘုရားသခင်ရဲ့ ချစ်သနားခြင်းကြောင့် မိသားစုနဲ့ အမေတို့နဲ့ ပြန်ပြေလည်လာတယ်။ နှစ်ချီကြာလာခဲ့တဲ့ ပြဿနာတွေ၊ ဝေဒနာတွေဟာ ဘုရားရဲ့ အချိန်ကျတော့ ပြေလည်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် ကယ်တင်ခြင်းရတာနဲ့ ဘုရားရဲ့ သနားခြင်းကြောင့်သာ ဒီလိုပြေလည်တာပါ။ စိတ်နှလုံးကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ကြည့်မြင်တော်မူပြီး၊ အပြစ်သားဘဝကနေ၊ ဘုရားသားဖြစ်လာစေတယ်။ ဒါက တခြားကြောင့် မဟုတ်ပဲ၊ သခင်ယေရှုကြောင့်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘဝဟာ အရင်ကဆို တိုက်ပွဲကြီးတခုပါ။ အခုတော့ ဘုရားတရား စိတ်ဝင်စားသူ ဖြစ်လာစေပြီ။ ကယ်တင်ရှင်ကို လက်ခံတဲ့ အချိန်ကစပြီး၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ပြဿနာတွေ၊ အပြောင်းအလဲတွေကြားမှာ မပြောင်းလဲတာကတော့ သခင်ယေရှုရဲ့ မေတ္တာပါပဲ။ ကျန်နေတဲ့ ဘဝရဲ့ အချိန်တွေမှာ ဘုရားအလိုတော်အတိုင်း ဘုရားသခင်အတွက် လုပ်ဆောင်ချင်လာတယ်။ သခင်ယေရှု မပါပဲနဲ့တော့ ပျောပျော်ရွှင်ရွှင် နေတတ်သူတယောက် ဖြစ်မလာဘူး။ စိတ်ရှုပ်နေဆဲ၊ ဘဝနစ်နေဆဲ ဖြစ်နေမှာပါပဲ။ လူတိုင်းအတွက် ဘုရားအလိုတော်ရှိပါတယ်။ ကျွန်မမှာတော့ အဲဒါ ဖြစ်လာခဲ့ပြီ။ မိဘတွေ အိမ်ထောင်ကွဲရာကနေ မိသားစုနဲ့ ရုန်းကန်နေရင်းနဲ့ ဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့် အဲဒီ ဒုက္ခရေလှိုင်းတွေနဲ့ပဲ ဘုရားသခင့်အနားကို ဆွဲခေါ်ခဲ့တာပါ။
ရှင်တို့အကြောင်းကော ဘယ်လိုလဲ။ ဘုရားက အသက်တာကို ပြောင်းလဲစေခဲ့ပြီလား။ မစဉ်းစားပဲ ဘဝကို အလောင်းအစားလို ကစားနေဆဲလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘုရားသခင် သိနေတယ်ဆိုတာ သတိရပါ။ ဘုရားမေတ္တာဟာ အခမဲ့ပါ။ တောင်းယူရုံပါပဲ။ ဘဝကို တမျိုး ပြောင်းသွားစေပါတယ်။ သိပ်အဖိုးတန်ပါတယ်။ ။
"အပြစ်တရား၏ အခကား သေခြင်းပေတည်း။ ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသော ဆုကျေးဇူးတော်ကား ငါတို့ သခင်ယေရှုအားဖြင့် ထာဝရအသက်ပေတည်း။" ရောမ ၆း၂၃။
Posted by Papa at 11:37 PM
QUOTATIONS (November, 2010 ) အဆိုအမိန့်
QUOTATIONS (November, 2010) အဆိုအမိန့်
1. Some people have yet to learn that they cannot travel in the wrong direction and reach the right destination.
လူတချို့မှာ မှားတဲ့ဖက်ကို ဦးတည်ရင် မှန်တဲ့ အရပ်ကို ရောက်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သင်ယူဖို့ လိုပါသေးတယ်။
2. One-half the trouble of this life can be traced to saying yes too quickly and not saying no soon. – Josh Billings.
လူ့ဘဝရဲ့ ဒုက္ခတဝက်က "Yes" လို့ အပြောမြန်လွန်းတာနဲ့ "No" လို့ မြန်မြန် မပြောလို့ ဖြစ်ရတာပါ။
3. Few men have virtue to withstand the highest bidden. – George Washington.
မက်လုံး ကြီးကြီးပေးတာကို ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့သူ နည်းနည်းပဲရှိတယ်။
4. If I can not do great things, I can do small things inagreat way. – J. F. Clarke.
ကြီးမြတ်တဲ့အရာတွေ မလုပ်နိုင်ရင်၊ သေးငယ်တာကို မြင့်မြတ်တဲ့ နည်းနဲ့ လုပ်ပါ။
5. You do not test the resources of God until you attempt the impossible. – F. B. Meyer.
မဖြစ်နိုင်ကို လုပ်မကြည့်မချင်း ဘုရားသခင် ဘယ်လောက် ကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်ဆိုတာ သိဦးမှာ မဟုတ်ဘူး။
6. The humblest citizen of all the land, when clad in the armor ofarighteous cause, is stronger than all the hosts of error.
အနိမ်ကျဆုံး ပြည်သားတယောက်က ဖြောင့်မတ်တဲ့ တရားအတွက် လက်နက်စုံကို ဝတ်ဆင်လိုက်တဲ့အခါ မကောင်းမှု တပ်မဟာကြီးထက် ပိုအားကြီးပါတယ်။
7. When God shuts and bolts the door, do not try to get in through the window.
ဘုရားသခင်က တံခါးပိတ်၊ ဂျက်ချထားတဲ့အခါ - ပြတင်းပေါက်က ကျော်ဝင်ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။
8. Love is never afraid of giving too much. ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ အများကြီး ပေးဆပ်ရမှာကို ကြောက်ရွံ့လေ့မရှိပါ။
9. People may doubt what you say, but they will always believe what you do. – The Bible Friend.
ကိုယ့်စကားကို လူတွေ သံသယရှိနိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကိုတော့ အမြဲ ယုံကြည်တတ်ကြပါတယ်။
10. The tavern keeper is the only businessman who is ashamed of his customers.
ကိုယ့်ဖေါက်သည်အတွက် အရှက်ရ ရတဲ့ စီးပွါးရေးသမားကတော့ အရက်ရောင်းတဲ့သူပါ။
11. Slight not what's near through aiming at what's far. အဝေးကို ရည်ရွယ်ရင်း၊ အနီးကို မထီလေးစား မလုပ်ပါနဲ့။
12. If you would not be forgotten as soon as you are dead, either write things worth reading or do things worth writing. – Benjamin Franklin.
သေတဲ့နောက်ပိုင်း ကိုယ့်ကို မမေ့စေချင်ရင်၊ ဖတ်ထိုက်တဲ့ စာတွေရေး၊ (သို့) ရေးဖို့ကောင်းတဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ခဲ့ပါ။
13. Do your giving while you're living, so you will be knowing where it's going.
အသက်ရှင်တုန်း ပေးကမ်းပါ၊ လှူပါ။ ဒါမှ ဒီငွေတွေ ဘယ်ရောက်သွားသလဲဆိုတာ သိလာနေပါလိမ့်မယ်။
14. Happiness is the flag that flies from the window of the heart when the King is in residence. - Curtis Hutson.
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ နန်းတော်ထဲမှာ ရှင်ဘုရင်ကြီး ရှိနေချိန်၊ စိတ်နှလုံး ပြတင်းပေါက်မှာ လွင့်ထားတဲ့ အလံပါပဲ။
15. A good father who finds his son on the wrong track will provide switching facilities.
လမ်းမှားနေတဲ့ သားကိုတွေ့တဲ့ ဖခင်ကောင်းတယောက်ဟာ လမ်းကြောင်းပြောင်းနိုင်မယ့် အရာတွေနဲ့ ကူမတတ်ပါလိမ့်မယ်။
16. God sometimes puts his children to bed in the dark. – D.L. Moody.
ဘုရားသခင်က သူ့သားသမီးတွေကို တခါတရံ အမှောင်မှာ သိပ်တတ်ပါတယ်။
17. The optimist has no brakes, the pessimist has no motor.
အကောင်းမြင်သမားမှာ ဘရိတ်မရှိပါ။ အဆိုးမြင်သမားမှာ မော်တာမပါပါ။
18. Before he can accumulate dollars,aman needs some sense. ငွေ မရှာခင်၊ အသိတရားတချို့ ရှိဖို့လိုပါတယ်။
19. Success is getting what you want; happiness is wanting what you get.
လိုတာရတာဟာ အောင်မြင်မှုပါ။ ရတာကိုပဲ လိုချင်နေတာကတော့ ပျော်ရွှင်မှုပေါ့။
20. The little man begins to preen himself as soon as he gets authority; the big man is concerned as to how he can use his authority for the common welfare.
သေးနုတ် သိမ်ဖျင်းတဲ့သူ အာဏာရလာရင် သူ့ကိုသူပဲ သ နေတော့တယ်။ ကြီးမြတ်သူကတော့ အများအကျိုးအတွက် သူ့အာဏာကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲလို့ ဆင်ခြင်လေ့ရှိပါတယ်။
21. A poor listener seldom hearsagood sermon. ခပ်ညံ့ညံ့ တရားနာသူဟာ တရားကောင်းကိုနာရခဲတယ်။
Posted by Papa at 11:33 PM
ထူးဆန်းတဲ့ ခရစ်စမတ် ပြဇာတ်တပုဒ် Trouble at the Inn...
Acid, Neutral, Alkaline အက်စစ်၊ အယ်လ်ကာလိုင်း၊ ကြာ...